Ubuntu Cinnamon 20.10 yazisa iCinnamon 4.6.6 | Ubunlog
Ubuntu Cinnamon 20.10 yazisa iCinnamon 4.6.6 kwaye ngoku iyavakala ngokufanayo nohlobo olukhulu
Sele sigubungele phantse lonke ukhuphelo kusapho lweGroovy Gorilla. Sisafuna ukupapasha inqaku malunga neXubuntu, kodwa abaphuhlisi bayo abasayipapashi ingxelo esemthethweni, ke siyakulinda ithutyana ukuqinisekisa ukuba into esiyipapashayo ichanekile. Yintoni efike izolo phantse ngaxeshanye neencasa ezisemthethweni yile ifuna ukuba njalo: Ubuntu Cinnamon 20.10, ogama lodonga olibona ngaphezulu kwale migca.
UJosuah Peisach uthetha ngeendaba zakhe e Inqaku lokukhupha. Phakathi kotshintsho, kukho ubuncinci ezimbini ebekulindelwe: isebenzisa iLinux 5.8 njengekernel, kwaye bahlaziye imeko yemizobo ukuze ICinnamon 4.6.6. Apha ngezantsi unoluhlu lwezona zinto zintsha zivelileyo nge-Ubuntu Cinnamon 20.10 Groovy Gorilla, inkqubo yokusebenza eqhubeka "negama lokugqibela" le-Remix.
Amagqabantshintshi e-Ubuntu Cinnamon 20.10
Ixhaswe iinyanga ezili-9, de kube nguJulayi 2021.
Izandi ezitsha. Okanye indala, kuxhomekeke kwindlela ojonga ngayo. Ngoku kuvakala ngathi Ubuntu esemthethweni. Inxulumene noku, ngoku unokuva ukuba umthamo ungakanani ngelixa uyitshintsha.
Baye balungisa iibugs ezininzi kumxholo weKimmo. Kwixesha elizayo, baya kuphinda bawupende umbala womxholo weYaru ngomxholo wabo weCinnamon.
Bongeze iRhythmbox kwakhona.
Iphakheji yeziqholo zesinamon isusiwe.
ICinnamon 4.6.6, eneenguqu ezinje:
I-systray ijongeka icocekile / intle.
INemo itshintshile ekubekeni phambili umxholo kunye nesantya / ukusebenza. Izithonjana zitshintshile, ke ngoku kuya kukhawuleza ukukopa iifayile ezinje ngeefilimu ukusuka kwifolda enye ukuya kwenye.
Inkxaso yokubeka iliso iphuculwe. Oku kubandakanya:
Useto lokujonga ngakumbi.
Ubungakanani beapps / ii icon ngoku zilungelelanisa nobungakanani bescreen.
Kukho ulwenziwo ngakumbi kwi-applet yekhibhodi yeCinnamon kunye nescreen.
Inkxaso ye-eulogy igqityiwe.
U-Peisach uthembisa ukuba kuninzi okulindelekileyo kokuphuculwa, kodwa kuya kufuneka silinde kude kube ngu-Epreli 2021 ukuze sikonwabele. Okwangoku, yintoni ngoku iyafumaneka Ubuntu Cinnamon 20.10 okoko enye nale Olunye unxibelelwano. Kuhlala kubonakala ukuba nge-21.04, isichazi sayo esele sisazi ukuba siya kuba ngu "Hirsute", Ubuntu Cinnamon sele isisincasa esisemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu Cinnamon 20.10 yazisa iCinnamon 4.6.6 kwaye ngoku iyavakala ngokufanayo nohlobo olukhulu
Umphathi wokuKhuphela Simahla (FDM), umphathi wokukhuphela Ubuntu